6 Amathrendi Ezobuchwepheshe ngo-2020 Wonke Amamaki Okufanele Awazi Ngawo | Martech Zone
ULwesine, May 7, 2020 ULwesithathu, May 6, 2020 UChristina Lyon
Akuyona imfihlo ukuthi ukuthambekela kokumaketha kuvela nezinguquko nobuchwepheshe obusha. Uma ufuna ibhizinisi lakho livelele, letha amakhasimende amasha futhi wandise ukubonakala ku-inthanethi, kuzodingeka ukuthi usebenze ngokushintshwa kwezobuchwepheshe.
Cabanga ngamathrendi ezobuchwepheshe ngezindlela ezimbili (futhi ingqondo yakho izokwenza umehluko phakathi kwemikhankaso ephumelelayo namakhilikithi kuma-analytics akho):
Kuphakathi kokuthi thatha izinyathelo zokufunda izitayela futhi uzisebenzise, ​​noma ushiye ngemuva.
Kulesi sihloko, uzofunda ngezindlela eziyisithupha zobuchwepheshe obusha emkhathizwe we-2020. Usukulungele ukwethula? Nawa amasu namathuluzi ozowadinga ukushaya phansi kulo nyaka.
Ithrendi 1: Ukumaketha kwe-Omnichannel akusekho ngokuzithandela, Kuyadingeka
Kuze kube manje, abathengisi baphumelele ukugxila eziteshini ezimbalwa zenhlalo abazothumela futhi bazibandakanye kuzo. Ngeshwa, lokhu akusenjalo ku-2020. Njengomakethi webhizinisi, awunaso isikhathi sokuthumela okuqukethwe kuwo wonke amapulatifomu. Esikhundleni sokwenza okuqukethwe ngokwezifiso kwesiteshi ngasinye, unga okuqukethwe okwenziwe kabusha bese uyithumela kuzo zonke iziteshi. Lokhu ngeke kugcizelele imiyalezo yakho yomkhiqizo, kepha kuzogcina ibhizinisi lakho lifanele futhi lihlanganyela nomphakathi wakho oku-inthanethi.
Ukumaketha kwe-Omnichannel kwenza izethameli zakho ngokuhlanganyela zivakashele iziteshi zakho ngokukhululeka. Umphumela?
Ukuthengiswa kwesiteshi esiphambanweni kubiza cishe ama- $ 2 trillion.
Ulungele ukubona ukumaketha kwe-omnichannel kusebenza? Bheka ukuthi umthengisi omkhulu wase-US, I-Nordstrom, Isebenzisa ukumaketha komzila wesiphambano:
I-Nordstrom Pinterest, Instagram, Futhi Facebook Ama-akhawunti wonke aqukethe okuthunyelwe komkhiqizo okuchofozekayo nokukhuthazwa kwesitayela.
Lapho abantu bebhekabheka noma yimaphi ama-akhawunti wezokuxhumana wakwaNordstrom, bangathenga okuthunyelwe okubaholela kuwebhusayithi yeNordstrom.
Lapho nje befika kusayithi, bangahlela i-aphoyintimenti yokuqokwa, balande uhlelo lokusebenza lwe-Nordstrom, futhi bathole ukufinyelela ohlelweni lwemivuzo yokwethembeka.
Ukumaketha kwe-Omnichannel kufaka ikhasimende kumjikelezo woketshezi wokuqukethwe, insizakalo yamakhasimende, ukuthengisa, kanye nemivuzo.
Umlayezo uphezulu futhi ucacile:
Ku-2020, udinga ukugxila ekumaketheni kwe-omnichannel. Ukukhuphuka kokumaketha kwedijithali nemithombo yezokuxhumana kudale isidingo samathuluzi wokushicilela azenzakalelayo. Ngokusobala, abaninimabhizinisi nabathengisi bamane abanaso isikhathi sokuthumela nsuku zonke kuzingxenyekazi eziningi.
Faka: Ukwakhiwa kokuqukethwe, ukukhulisa usayizi nokushicilela amathuluzi kusuka ku- I-PosterMyWall. Awugcini ngokudala okuqukethwe, kepha ungakushintsha usayizi wakho ubuyekeze ubukhulu obuhlukahlukene njengokuthunyelwe kwe-Instagram noma izithombe ezabiwe ku-Facebook ohambeni. Ibhonasi? Kumahhala. Kepha akwanele ukudala okuqukethwe, ufuna ukukushicilela futhi.
Ukonga isikhathi, hlanganisa imisebenzi yakho yokudala nokushicilela ndawonye. Ngasikhathi sinye, ungakha okuqukethwe okubukwayo okuhehayo bese ukukuhlela ukuze kushicilelwe ngokuzenzakalela esiteshini ngasinye. Ngokushintsha usayizi wedizayini usohambweni nokushicilela okuzenzakalelayo ngokuchofoza okulula kwegundane, wonga isikhathi, imali futhi ugcine umkhiqizo wakho uhambisana.
Ukumaketha kwe-Omnichannel kufana nokuba khona konke online, futhi lolo inguquko ye-tech ka-2020 ongeke uyizibe.
Ithrendi 2: Ikusasa Lokumakethwa Kwevidiyo
Ukumakethwa kwevidiyo kuyigama eliyimpicabadala muva nje, kepha ingabe kufanele konke ukujabula? Uma ucabanga ukuthi abantu abangaphezu kwesigamu ku-inthanethi babuka amavidiyo nsuku zonke, ngokusho kwezibalo zokumakethwa kwevidiyo kusuka HubSpot, Ngingathi kuyaduma lokhu Yebo. Abantu babuka hlobo luni lokuqukethwe? I-YouTube ayisabuseki njengoba izikhangiso zevidiyo ze-Facebook, izindaba ze-Instagram ne-Live zikhula ekuthandeni.
The Isihluthulelo sokumaketha okusebenzayo kwevidiyo ukwenza ngezifiso. Abantu abasenantshisekelo yokubuka amavidiyo apholishwe kakhulu, akhethiwe. Esikhundleni salokho, banxanela okuqukethwe kwamavidiyo okuhambisana nezintshisakalo zabo. Amavidiyo alinganayo ziyindlela enhle yokuxhumana nezithameli zakho futhi wabelane ngohlangothi olusondelene lomkhiqizo wakho.
Futhi ungakhathazeki, awudingi umdwebi wevidiyo oqeqeshiwe ukudala okuqukethwe kwevidiyo okubandakanyayo. Ungaqamba kalula amavidiyo afanele futhi ahehayo kusuka ekuqaleni, noma kusuka amathempulethi evidiyo ku-PosterMyWall. Dala amavidiyo ukuze uvumelanise umlayezo womkhiqizo wakho, ukhuthaze ukwethulwa komkhiqizo noma wazise izithameli zakho ngezindaba zenkampani.
Nakhu ukuthi kulula kanjani i-PosterMyWall:
Dlulisa amehlo kumathempulethi evidiyo ukuze uthole okulingana ithoni nomyalezo womkhiqizo wakho
Chofoza kudizayini ukwenza ngezifiso isifanekiso
Sebenzisa isihleli ukwenza ngokwezifiso ikhophi, imibala, amafonti nokuklama
Yabelana ngevidiyo ngqo eziteshini zakho zenhlalo kusuka ku-PosterMyWall
Ngezinyathelo ezine ezilula, unevidiyo enophawu lokwabelana! Ngokuqukethwe kwevidiyo okufushane nokubandakanyayo, uzigcina useqhulwini ekunakeni kwezithameli zakho, futhi leyo yindawo enhle ongaba kuyo.
Ithrendi 3: Yenza Imikhiqizo Itholakale Emakethe yeGoogle
Ushintsho olusha lobuchwepheshe lube yisihloko senkulumo mpikiswano enkulu kubakhangisi: ukuhlohla imikhiqizo ku-Google Marketplace. Abaphikisi baphikisana nokuthi batshale imali enkulu ekwakheni iwebhusayithi ehehayo ekhombisa uphawu lwebhizinisi labo nobunikazi babo. Ukuphusha imikhiqizo kuGoogle kususa ithuba lezivakashi ukumangala ngesiza sazo esihlanganiswe ngokuphelele. Umphumela? Ukwehla okuphawulekayo kuthrafikhi yewebhu.
Kuzofanele ubheke ngale kwa-metric ukubona isithombe esikhudlwana lapha. Ngabe ufuna ukwenza ukuthengisa? Noma ufuna ukuba newebhusayithi evakashelwe kakhulu? Vele, ufuna ukuthengisa, kepha awuthengisi okukodwa, ufuna amakhasimende aphindaphindiwe, yingakho udale iwebhusayithi enhle, akunjalo? Kwesokudla.
Esikhundleni sokubheka i-Google Marketplace njengokufa kwewebhusayithi yakho, yicabange njengesinye isiteshi sokuqwashisa ngomkhiqizo wakho. Ngenkathi eminye imikhiqizo ihlehla ekucindezelweni kwemikhiqizo ku-Google nokulahlekelwa yithrafikhi, ungangena ungene ohlwini lwemikhiqizo yakho, uthole ukuthengisa, futhi ukhulise umkhiqizo wakho.
Iqiniso lokuthi ungabhala uhlu lwemikhiqizo yakho ongayithengisa nge-Google ngemizuzu nje embalwa likwenza kube ithuluzi lokumaketha (futhi mahhala!) Ongeke ukwazi ukuliziba.
Nansi indlela ongayenza ngayo:
Okokuqala, hamba uye ku- I-Akhawunti Yebhizinisi Lami le-Google, lapho ungabala khona imikhiqizo yakho, imininingwane yomkhiqizo, engeza izithombe bese uqala ukuthengisa kungakapheli imizuzu. Vele, uzofuna ukuqinisa igama lakho lomkhiqizo, ukuthumela imiyalezo nokubeka uphawu uphawu kusuka kuwebhusayithi yakho nakwiziteshi zezokuxhumana. Okusho ukuthi, awufuni ukuphonsa i-hodgepodge yohlu lomkhiqizo olungcolile. Phatha iMakethe yeGoogle ngendlela efanayo naleyo obuzokwenza ngayo isitolo sakho esiku-inthanethi bese ucabanga ngezithombe, amakhophi nezincazelo zomkhiqizo.
Ithrendi 4: I-SERPS Favor Schema Markups nama-Snippets Acebile
Ukumaketha kwedijithali ngokungangabazeki kuncike ku-SEO (Search Engine Optimization). Ngo-2020, uzodinga ukwenza okungaphezu kokukhetha amagama angukhiye aqondisiwe futhi usebenzise umbhalo we-alt alt ukuletha ithrafikhi yewebhu. Yebo, usadinga ukusebenzisa izindlela ezinhle kakhulu ze-SEO, kepha manje kuzodingeka ukuthi uthathe isinyathelo esithe xaxa futhi udale amazwibela acebile nge-Schema Markups.
Amazwibela acebile aqukethe i-microdata, ebizwa nge-Schema markup, etshela ngokusobala izinjini zokucinga ukuthi ikhasi lewebhu ngalinye limayelana nani. Isibonelo, uma ufaka “umenzi wekhofi” kubha yosesho yakwaGoogle, imiphi yale miphumela ocabanga ukuthi abantu banamathuba amaningi okuchofoza kuyo:
Incazelo yomkhiqizo ecacile, intengo, isilinganiso samakhasimende nezibuyekezo
Incazelo ye-meta engacacile idonswe ngokungahleliwe kusuka ekhasini, akukho ukukalwa, akukho ntengo, akukho lwazi
Uma uqagele inketho yokuqala, uqinisile. Ku-2020, zonke izinjini ezinkulu zokusesha, kufaka phakathi iGoogle neYahoo!, Zibona ama-schema markups namazwibela acebile lapho kudonswa ama-SERPs (Amakhasi we-Search Engine Amakhasi).
Yini ongayenza? Unezinketho ezimbili: sebenzisa Schema.org ukudala amazwibela acebile, noma ukusizakala nge- leli thuluzi lamahhala elivela kwa-Google. Manje, ikhasi ngalinye lomkhiqizo wakho ligcwele imininingwane efanele, ekhulisa ukubonakala kwebhizinisi lakho.
I-Trend 5: I-AI izolekelela i-Hyper-Personalization
Kuzwakala njenge-oxymoron? Ngandlela thile, kunjalo, kepha lokho akukunciphisi ukubaluleka kwayo. Lapho sixoxa ngokwenziwa kwakho esikhaleni sokumaketha, sihlola izindlela zokunikeza umuzwa owenziwe waba ngewakho kakhulu kumakhasimende.
Ake ngicacise: I-AI ngeke yehlise isithunzi somkhiqizo uma isetshenziswe kahle. Esikhundleni salokho, izosiza ekwakheni isipiliyoni sokwenza amakhasimende esenziwe ngokwezifiso nangaphezulu. Ngemuva kwakho konke, abathengi bakhathele yimithombo yezindaba engenabuntu. Lapho ubheka iqiniso lokuthi imithombo yezindaba ikuyo yonke indawo ibafaka nge Izikhangiso ezingama-5,000 ngosuku, kulula ukubona ukuthi kungani bekhathele. Esikhundleni sokungeza umsindo, ungasebenzisa ngobuciko i-AI ukunakekela umuzwa owenziwe waba ngowakho kakhulu.
Ngezinguquko kubuchwepheshe nokuthutheleka kwesoftware ye-AI, abathengisi bangafinyelela kumakhasimende abo ezingeni elisondelene kakhulu. Enye yezindlela ezinhle kakhulu ongasebenzisa ngayo i-AI ukuthola okwakho ukuqoqa idatha mayelana nokuthi yikuphi okuqukethwe abakuthandayo.
Hlola ngokucophelela ama-analytics wakho wewebhu kanye nokuqonda kwezokuxhumana. Yimaphi amaphethini avela? Usungule ama-personas wamakhasimende ukudala uphawu nomfanekiso okhuluma nabo. Noma kunjalo, lokho akwanele uma ufuna ukuxhumana kwangempela komkhiqizo namakhasimende.
Kungakho imikhiqizo emikhulu isebenzisa i-AI ngoba ngayo…
INetflix ingaqagela ukuthi umsebenzisi ngamunye ufuna ukukubuka ini ngokuya ngomlando wakhe.
Ngaphansi kwezithungi ze-Armor uhlobo lwezempilo olususelwa kubasebenzisi bokudla, ukulala nemikhuba yezempilo.
Ama-Chatbots angabuza izivakashi ekhasini lakho lomkhiqizo le-Facebook uma edinga usizo ukuthola umkhiqizo noma insizakalo ethile.
Iphuzu eliyinhloko: ukuthola i-hyper-personal namakhasimende akho ngo-2020, uzodinga usizo oluncane oluvela ku-AI.
Ithrendi 6: Ukusesha Ngezwi Ngeke Kufake Okuqukethwe Okubukwayo
Ukwanda kosesho lwezwi kunabathengisi abaguqulela okuqukethwe okufundekayo ngobuningi kufomethi yezwi yezinjini zokusesha. Ukusesha ngezwi kungumkhuba ku-radar yawo wonke umuntu, futhi kufanele:
Ingxenye yokuseshwa izokwenziwa ngokuseshwa kwezwi ngo-2020.
Cishe kungumbono omuhle ukugxila ekusesheni ngezwi, kepha ngokwenza njalo, ungenzi iphutha lokucabanga ukuthi okuqukethwe okubukwayo kuyisinkwa sosuku. Eqinisweni, kuphambene impela. Udinga ubufakazi? Ibizwa nge-Instagram, futhi inakho Abasebenzisi abangu-1 abayizinyanga ezikhokhelwayo ngenyanga kusukela ngoJanuwari 2020.
Abantu bathanda ngokungenakuphikwa okuqukethwe okubukwayo. Kungani bengeke? Ngokubonwayo, banga:
Funda amakhono noma imininingwane efanele izintshisekelo zabo
Zama izindlela ezintsha noma udale ubuciko nobuciko
Bukela amavidiyo ajabulisayo nafundisayo
Thola imikhiqizo emisha nemikhiqizo
Yize ukubaluleka kokumaketha okubukwayo kungakashintshi ngo-2020, ukufika kwemiqondo emisha kungalinga abathengisi kude nokwakha okuqukethwe okubukwayo. Lokhu nakanjani kuzoba yingozi. Kungakho kubaluleke kakhulu ukufaka okuqukethwe okungajwayelekile kuwo wonke amasu akho okufinyelela.
Ukukusiza, iPosterMyWall igcwele ngokuphelele ngomfanekiso imilabhulali, izifanekiso zevidiyo, nezinkulungwane amathempulethi aklanywe ngobunyoninco. Ngale software eklanyelwe mahhala, ungenza ngezifiso izifanekiso ngokushintsha imibhalo, imibala nezithombe ukufanisa ukufaka uphawu kophawu lwakho. Noma, ungenza okuthunyelwe kokuxhumana nomphakathi, izithombe zebhulogi, izithombe zomkhiqizo ezenziwe ngezifiso nezimpahla zokuphromotha kusuka ekuqaleni nge-software yokuhlela okulula ukuyisebenzisa.
Ungakhohlwa ukuphindisela lezi zibuko ukuze ukhombe ukumaketha kwakho kwe-omnichannel. Isibonelo, ungakha iheda yeposi yebhulogi bese uyishintsha ibe iphini lePinterest noma i-Instagram post ne-voila, unokuqukethwe okubukekayo okumangazayo kweziteshi eziningi!
Yenza Izinguquko Zobuchwepheshe Zikusebenzele
Ngo-2020, uzodinga ukufaka inetha elibanzi ukuletha amakhasimende, wakhe ukuqwashisa ngomkhiqizo futhi ukhulise ibhizinisi lakho. Ukwenza lokho, kubalulekile ukuhlala uguquguquka futhi uphambi kwamathrendi. Ukhiye wokumaketha okuqukethwe wukuzivumelanisa nezimo, njengoba abathengisi bemelana nokushintsha ubungozi imakethe eguqukayo ngaphandle kwabo. Lapho uvuleleka futhi usebenza ngokwengeziwe ekuguqukeni kobuchwepheshe, ungazisebenzisa kangcono ukuze uzuze. Futhi uma wenza? Hhayi-ke, akunakukuvimba!
Tags: ukuthambekela kwezentengisoomnichannelubuchwepheshe izitayelaizitayela
UChristina Lyon ungumbhali, i-blogger nomculi ovela eSoCal enelanga. Uvutha umlilo ngokusiza amabhizinisi akwi-inthanethi ukuthi akhule ngekhophi lokumaketha elihilelekile. Lapho esuka edeskini lakhe, uChristina uthanda ukufunda izindaba eziqanjiwe, ukuhambahamba olwandle nokudlala umculo.